Parlemanta Eoropeana : Mpanao kolikoly -
AccueilRaharaham-pirenenaParlemanta Eoropeana : Mpanao kolikoly
Namoaka fanambarana ny amin’ny tokony hisian’ny fifidianana malalaka, mangaraharaha amin’ny taona 2018 ny Parlemanta Eoropeana ny alakamisy 16 Novambra 2017 teo tany Strasbourg. Mandeha an-jambany fotsiny araka izany ny fivoriana sy ny fanapahan-kevitra raisin’ity Parlemantera Eoropeana ity. Tsy vitan’izany fa manitsakitsaka ireo fifanarahana iraisam-pirenena maro, raha tsy hiresaka afatsy ny “accord de Cotonou” sy ny Satan’ny Vondrona Afrikana.
Nanameloka marindrano ny fanonganam-panjakana nisy teto Madagasikara ny Parlemanta Eoropeana ny taona 2009 (17 sy 20 Marsa ary 3 Desambra) nahitàna an’i Louis Michel, Renate Weber ary Charles Goerens. Nasongadin’ny Parlemanta Eoropeana nandritra io fanapahan-kevitra ireo andininy voalaza ao amin’ny « accord de Cotonou ». Nasian’ity Parlemanta Eoropeana ity tsindrim-peo tamin’izany ireo fandikan-dalàna, herisetra sy vonoan’olona ary ny tsy fanitsakitsahana ny zon’olombelona nataon’ny fitondrana Andry Rajoelina, ankoatra ny jadona sy ny fanaovana ampihi-mamba ny rafi-panjakana rehetra ary ny fampiasana ny Tafika ho amin’ny tombotsoa manokan’ireo mpanongam-panjakana. Voasoratra nivandravandra tao anatin’izany fanapahan-kevitry ny Parlemanta Eoropeana izany ny teny hoe « coup d’Etat », izay nomelohan’ny « accord de Cotonou » sy ny Satan’ny Vondrona Afrikana.
Nampiasa ny « accord de Cotonou » hatrany ny Parlemanta Eoropeana isaka ny mandray fanapahan-kevitra momba an’i Madagasikara. Voalaza ao amin’ny foto-kevi-dehibe faha-dimy ijoroan’ity fifanarahana tany Cotonou ity anefa ny mikasika ny resaka mersenera (Dimension politique : consolidation de la dimension politique par l’adoption d’une approche axée sur le dialogue et les résultats (articles 8, 9, 96, 97 et annexe VII) ; introduction d’une disposition relative à la Cour pénale internationale, d’une référence à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, d’une clause réaffirmant les efforts de coopération internationale des partenaires dans la lutte contre le terrorisme et d’une disposition sur les activités mercenaires). Voaporofo ary hitan’izao tontolo izao anefa ny fampiasan’i Marc Ravalomanana mersenera vahiny teto Madagasika ny taona 2009. Izany hoe, tokony niakatra teny anivon’ny Fitsarana ady heloka be vava iraisam-pirenena mihitsy ity filoha teo aloha ity araka io voalazan’ny « accord de Cotonou » io.
Nasian’ny Parlemanta Eoropena tsindrim-peo tamin’ny fanapahan-kevitra noraisiny farany teo ny resaka fahaleovantenan’ny Fitsarana amin’ny asany. Tokony hilaza amin’ny Fitsarana araka izany ny Parlemanta Eoropeana mba hampihatra ireo didim-pitsarana rehetra. Mbola tsy nahazo ny onitra araka ny didy navoakan’ny Fitsarana mikasika ny raharaha 7 Febroary 2009 mantsy ireo mpikambana ao amin’ny AV7 ary tsy mbola nanefa ny saziny ihany koa izay rehetra voaheloka tamin’iny raharaha iny(Oh : Sazy an-terivozona mandra-pahafatiny ohatra ho an’i Marc Ravalomanana). Nisongadina nandritra ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Parlemanta Eoropena ny alarobia lasa teo koa ny momba ny fanondranana « bois de rose » sy harem-pirenena. Heverin’ny mpanara-baovao fa tokony manana antontan’isa be lavitra ny amin’io resaka fandrondranana andramena sy harem-pirenena io ry zareo Eoropeana. Ny fanadihadiana nataon’ireo fikambanana tsy miankina vahiny ihany mantsy no namoaka ny tarehimarika milaza fa 75.000 T ny « bois de rose » naondrana teo anelanelan’ny taona 2009-2010.
Koa averina amin’ny Parlemanta Eoropeana ny fanapahan-kevitra noraisiny tamin’ny alarobia 15 Novambra lasa teo: “inona no tian’izy ireo ambara amin’ilay hoe fifidianana malalaka? Fanekena ny mpanongam-panjakana sy ny mpampiasa mersenera hilatsaka hofidiana?”, mifanimpaka tanteraka amin’ny voalazan’ny “accord de Cotonou”. Raha izay mantsy dia tokony hofoanana avokoa ireny fifanekena iraisam-pirenena rehetra ireny izay lasa lalàna nifanarahan’ny firenena maro (fifanarahana tany Cotonou, ny Satan’ny Vondrona Afrikana, sns) satria azo hitsakitsahana ary tsy misy heviny eo anatrehan’ny Eoropeana. Izay no ilazana fa mpanao kolikoly avo lenta ity Parlemanta Eoropeana ity, tsy vitan’izany fa mpanitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena aty Afrika.